ခင်မင်းဇော်: January 2008
သူပြောလိုက်တာနဲ့ ကျမ သိလိုက်တယ်။ ဒါ ကျမသူငယ်ချင်းထဲက တယောက်လို့…။
သူ့နဲ့ ကျမ ရန်ကုန်မှာ ရှောင်နေတုန်းက တွေ့နေသေးတာပဲ။ သူအရင်မိသွားတယ်လို့ ကြားမိပေမဲ့ သတင်း ဆက်မကြားတော့တာ ခုမှ သူလဲ ဒီထဲ ရောက်နေသကိုး လို့ သိလိုက်ရတော့ ပိုအားရှိသွားတယ်။ ခုချိန်မှာ ဒီလို တိုက်ပိတ်ခံထားရတာ ငါတယောက်တည်း မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။ အဲဒီတယောက်နဲ့ကတော့ အမှုတွဲခြင်းမတူဘူး။ သူတို့ အမှုတွဲအားလုံး ဖမ်းမိတုန်းက သူရန်ကုန်ရောက်နေချိန်။ သူ့အမှုတွဲတွေ ရုံးထွက်တော့ ကျမ သွားကြည့် ဖြစ်သေးတာပဲ။ မိန်းကလေး အုပ်စုတွေကို အရင်ရုံးထုတ်တော့ မျက်နှာတွေ ဖူးယောင်ပြီး ထွက်အလာ တရားသူကြီး တောင် လန့်သွားတယ်။ ရုံးထွက်လာစောင့်နေတဲ့ လူတွေ အားလုံး ဒီလောက်ရိုက်ရလား ဆိုပြီး ပြောကြဆိုကြ မေးကြတော့ စစ်ကြောရေး က လက်ချက်မှန်း သိကြရတယ်။ ခုကျမ ရောက်နေတဲ့ စစ်ကြောရေး နေရာကို သူတို့ အရင်ရောက်ခဲ့တာ။ နောက်သူတို့ အုပ်စုက လူများတော့ တပတ်ပဲ နေလိုက်ရတာ ကျမသိပြီးသားအချက်တွေပဲ။ ခုတော့ သူ့လူတွေကို အမိန့်ချပြီးချိန်မှ သူ့ကို ထပ်ဖမ်းမိသွားတာပေါ့။
ကျမကို ပြောပြနေတဲ့ စစ်သားရဲဘော်လေးက တံခါးပြန်ပိတ်တော့မယ် ဆိုပြီး ပိတ်သွားချိန်မှာတော့ ဒီကောင်ရော ဘယ်လောက် ခံနေရပြီလဲ မသိဘူး လို့ တွေးမိတယ်။ နောက်ပိုင်းနေ့တွေမှာတော့ အဖျားကျသွားပြီး မိန်းကလေးတွေ ဖြစ်နေကျ ရာသီလာချိန်နဲ့ ကြုံပြန်တယ်။ ကျမကို ထမင်းလာပို့တဲ့ အမတွေကို ကျမဆီမှာ မိန်းမ အသုံးအဆောင် အားလုံး ပါတယ် ။ ယူပေးပါ ပြောတော့ သူတို့ သတင်းသွားပို့ပြီး ယူလာပေးလို့ အားလုံး အဆင်ပြေသွားတယ်။ (တခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့ ပြန်ဆုံကြတော့ သူတို့ ကို အဲဒီရက်တွေမှာ ဒီအတိုင်းထားတာပဲ လို့ သိရပါတယ်။ဒါဟာ မိန်းကလေးတွေကို ကြီးစွာသော အရှက်ရအောင် လုပ်တာပဲ လို့ ကျမ တွေးမိပါတယ်။) ကျမကိုတော့ ဒီရက်တွေမှာ ခေါ်ပြီးစစ်တာ မလုပ်သေးဘူး။ ကျမကို မဖမ်းခင်ကတည်း ဖမ်းခဲ့ရင် ယူသွားရမယ့် ပစ္စည်းတွေကို အမြဲ အဆင်သင့် ထုတ်ထားခဲ့လို့ သူငယ်ချင်းတွေက နမိတ်မရှိတာဟယ်လို့ ပြောတာကိုလဲ သတိရမိသွားတယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ့်ဘက်က ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု အချိန်တိုင်းရှိခဲ့ရင် ဘယ်တော့မှ ဘယ်သူ့ကိုမှ ကြောက်စရာ မလိုဘူးလို့ ပိုပြီး ယုံကြည်လာတယ်။
ဒုတိယရဲဘော်တွေ ပြောင်းသွားချိန်တောင် ရောက်ခဲ့ပြန်ပြီ။ နောက်တသုတ်ရောက်တော့ လည်း ထမင်းပို့တဲ့ အမကြီးတွေက ဒီနေ့ရဲဘော်နောက်တသုတ်တဲ့။ သူတို့တွေက ကျမကို အထူးအဆန်းဖြစ်နေပုံပဲ။ ခပ်ငယ်ငယ် ရဲဘော်လေး တယောက်က ရေဗူးဖြည့်ပေးရင်း ဒီတဗူးကို တနေ့ပဲ သောက်တာလားတဲ့။ ကျမက အင်းလို့ ဖြေတော့ ထမင်းလာပို့တဲ့ အမတွေက သူ့မှာ စားစရာ ဘာမှ မရှိတာကိုဟယ်တဲ့။ သူတို့ မျက်နှာတွေမှာတော့ နောက်ပိုင်း သိပ်ကြောက်တာ မတွေ့ ရတော့ဘူး။
အဲဒီ တတိယပတ်ထဲမှာ တနေ့လည်ခင်း ကျမကို လာခေါ်တာကို ကြုံရတယ်။ အခန်းတံခါးကို ဖွင့်ပြီး ဟိုဘက်လှည့်နေ လို့ ပြောသံကြားကတည်းက ကျမကို ခေါ်ထုတ်တော့မယ်လို့ သိလိုက်တယ်။ မျက်နှာကို ခေါင်းစွပ် စွပ်လိုက်ပြီး အပြင်ထွက်လာတော့ ဖိနပ်ရော လို့ လာခေါ်တဲ့ တယောက်က မေးတယ်။ ဖိနပ်ပြတ်သွားပြီလို့ ပြောလိုက်တော့ ရဲဘော်တွေ ဆီက ဖိနပ်တရံလောက် လာပေးလို့ တောင်းသံကြားတယ်။ နောက် ကျမရှေ့ကို ရောက်လာတဲ့ သားရေ ဖိနပ်ခပ်ဟောင်းဟောင်းတရံကို စွပ်လိုက်ရတယ်။ အားပါးးးးးးးး.. ဖိနပ်က အကြီးကြီး ဖြစ်နေတယ်။ နဂိုကတည်းက ကျမက ခြေထောက်သေးတဲ့ လူစားလေ။ သာမန်မိန်းမစီး ဖိနပ်ဝယ်ရင် နံပါတ် ၅။ နိုင်ငံခြားဖြစ်ဆိုရင် ၃၈ ။ အင်း ကျမကို စစ်ဆေးမယ့် ဆီကို အဲဒီဖိနပ်ကြီးကြီး တရွတ်ဆွဲလို့ လိုက်ပါသွားရပြန်ပါတယ်။
ဒီတခါတော့ လေတဖြူးဖြူး တိုက်နေတဲ့ နေရာ တခုပဲ။ ကျမထင်တာက အမိုးရှိပြီး အကာမရှိတဲ့ နေရာ တခုလို့ ထင်လိုက်တယ်။ ဘာလို့ဆို ကျမထိုင်နေတဲ့ နေရာနဲ့ ကျမကို စစ်တဲ့ လူရဲ့ ကြားမှာ ရှိတဲ့ အကွာအဝေးက နည်းနည်းဝေးနေတယ်။ နေ့ခင်းဘက် ဆိုပေမယ့် လေတိုက်တော့ အေးလိုက်တာ။
ဒီတခါစစ်မယ့်လူက သူ့ကိုယ်သူ မိတ်ဆက်တယ်။ သူက ဗိုလ်မှုးပါတဲ့။ ကျမကို နာမည်မခေါ်ပဲ စကားပြောတယ်။ နင် နဲ့ ငါ သုံးတယ်။ မေးခွန်းတွေ ဆက်တိုက်မေးတယ်။ ကျမရှေ့က အမှုတွဲတွေ ဖြေသွားတဲ့အထဲက အဖြေတွေက သိပ်ကောင်းနေတော့ ကျမက အဲဒီအတိုင်း ထပ်ဖြေနေရတယ်။ သူတို့အားလုံးဟာ အလုပ်ကိစ္စတွေ ငွေပေးငွေယူတွေ အားလုံးကို ကျမ ဆီမှာ အဆုံးသတ်ထားတယ်။ ကျမ လွတ်ပြီထင်တာကိုး။ ဒီတော့ ကျမကလည်း အားလုံး ကျမဆီမှာ အဆုံးသတ်မဲ့ အဖြေတွေကို သေချာ ဖြေနေရတယ်။ အမှုဖြစ်စဉ်ကလည်း အင်မတန် ရှင်းလင်းပါတယ်။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့မှာ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် အမှတ်တရ စာစောင်လေး တခုကို ဧရာဝတီတိုင်း ဗကသ နာမည်နဲ့ ထုတ်ဝေခဲ့မှုပါ။ စာစောင်ထဲမှာတော့ ရဲရင့်တက်ကြွတဲ့ ကျောင်းသားငယ်လေးတွေရဲ့ ကဗျာတွေ ဆောင်းပါးတွေနဲ့ အဲဒီအချိန်က စစ်အုပ်စုကို တိုက်ခိုက်ထားတာတွေ ပေါ့။
အဲဒီအချိန်တုန်းက စာအုပ်ထုတ်ဖို့ ပိုက်ဆံကို ကျမထုတ်ပေးခဲ့ရတာ မှန်ပေမယ့် အဲဒီငွေတွေ ဘယ်က ရလဲ ဘယ်သူမှ မဖြေခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ တကယ်တော့ အဖမ်းခံခဲ့ရသူ အားလုံး ဒီပိုက်ဆံတွေကို ကျမနဲ့အတူ ကောက်ခံခဲ့ကြတာပါ။ သူတို့ ဘယ်သူတွေပေးတယ် ဆိုတာကို လုံးဝမဖော်ခဲ့ကြပါဘူး။ နောက် ကျမတို့ ဧရာဝတီတိုင်းက ၂၆ မြို့နယ် ရှိနေတော့ ၂၆ မြို့နယ်လုံးကို လိုက်လံ ဖြန့်ဝေပေးခဲ့သူတွေကို လုံးဝမဖော်ခဲ့ပါဘူး။
ရှေ့က ကျမ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ထွက်ဆိုချက်ကို ဖတ်ပြသွားသူကို ကျေးဇူးအရမ်း တင်နေမိပါတယ်။ ကျမသူငယ်ချင်းတွေဟာ လူတိုင်းသိနိုင်မယ့် အရာတွေကိုသာ ဖြေပေးခဲ့ပြီး တကယ့်ကို ကျမတို့ အချင်းချင်းသာ သိနိုင်တဲ့ အရာတွေကို လျှို့ဝှက်ထားပေးခဲ့တာ အသေအချာမို့ ကျမကလည်း သူတို့နဲ့ တလေတည်း ဖြစ်အောင် ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာစောင်ကို နယ်မြို့လေးတမြို့က ကျောင်းသားငယ်လေး တယောက်စီက မိသွားပြီး အစပြန်ဖော် ဖမ်းမိတာ တသီကြီး ဖြစ်ပေမယ့် ကျမတို့အမှုတွဲက ကျမအပါအ၀င်မှ လေးယောက်ပဲ ထောင်ကျခံခဲ့ရတဲ့အထိ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ကျေခဲ့ကြတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သူငယ်ချင်းတွေကို စိတ်ထဲက လေးစားမိနေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လဲ စစ်ကြောရေးဟာ ကျမအတွက် သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်နေမိပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကျမက စိတ်ထဲမှာ ပိုင်းဖြတ်ထားပြီး ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ထောင်ကျမှာပဲ ဆိုတာ ပိုင်းဖြတ်ပြီးသွားတဲ့အခါ လွတ်ချင်လွတ်မှာ ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက် မရှိတော့သလို အဲလို မျှော်လင့်ချက် ဖြစ်လာဖို့ ၀န်ခံတာတွေ ဖော်ကောင်လုပ်တာတွေ မလိုတော့ဘူး မဟုတ်လား။ ဒီအခါမှာ အဖြေတွေဟာ ပြတ်သားရဲရင့်နေမယ် ဆိုတာ သေချာနေပါတယ်။
သူတို့ ကျမကို အမှုတွဲ စစ်ချက်တွေ ဖတ်ပြတုန်းက နင့်လူတွေက နင့်ကို ဒီလို ထိုးချထားတယ် ။ ဒီဟာတွေ ဖော်ထားတယ်။ နင်လဲ ဖော်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ဖတ်ပြတာ ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကျမဆီမှာပဲ လမ်းဆုံးမယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရှေ့က သူငယ်ချင်းတွေဆီက ကျမ ရလိုက်နိုင်ခဲ့တာ အမြတ်ပါပဲ။ သူတို့တွေဟာ ဒီအမှုတွဲကို နာမည်ခံပြီး ထောင်ချကို ချတော့မယ် ဆိုတာ ပိုသေချာ တဲ့ အချက်တွေကိုလည်း မေးခွန်းတွေထဲက သိနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီဗိုလ်မှုး ဆိုတဲ့ လူက ကျမတို့ မဲဆွယ်ခရီးစဉ်တွေကိုလည်း ပြန်လည်မေးပါသေးတယ်။ နင့်နာမည်ကို တ၀တ မှ စာရင်းတင်ထားတာ အမြဲတွေ့နေရတယ်။ နင့်လို လူက ဘာတွေ ဟောပြောစည်းရုံးခဲ့သလဲ တဲ့။ ကျမတို့ မဲဆွယ် ခရီးစဉ်တွေကို တလကြိုတင် စီစဉ် စာရင်းတင်ရပြီး လူအတိအကျ နေရာ အချိန်မလွဲအောင် သွားရပါတယ်။ တ၀တ လို့ခေါ်တဲ့ တိုင်းငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေး အဖွဲ့ ဆီကို ကြိုတင်ထားတဲ့ စာရင်းထဲ မပါရင် လိုက်ခွင့် မရှိပါဘူး။ လိုက်ပါခဲ့ရင်လဲ အဖမ်းခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ကျမတို့ ကြိုတင်ထားတဲ့ ခရီးစဉ်အတိုင်း တစည (တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ) က အကုန်လိုက်ပါတယ်။ ကျမတို့ ၀င်မယ့် ရွာတိုင်းကို သူတို့ အရင်ကြိုဝင်ပါတယ်။ ကျမတို့က လမ်းလျှောက် လှေစီးနေတဲ့ နေရာတွေကို သူတို့က စက်လှေ သင်္ဘောတွေနဲ့ အရင် ကြိုရောက်နေကြပြီး ရွာတွေမှာ အလှုတွေလုပ် မဏ္ဍပ်တွေထိုး စာရွက်တွေ ကပ်လုပ်နေကျပါ။ ရွာသားတွေကို ခြိမ်းခြောက် စည်းရုံးမြဲပါ။ ဒီခရီးစဉ် အားလုံး ပေါက်ကြားမှုဟာ တ၀တ အပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ စစ်တပ်က တစညကို နောက်ကပံ့ပိုးတယ် ဆိုတာ သိသာ ထင်ရှားမှုတွေပါပဲ။
ကျမ ဟောပြောစည်းရုံးစရာ မလိုပါဘူး။ ကျမကြုံတွေ့ခဲ့ရမှု အဖြစ်မှန်တွေကို သာ ပြောပြခဲ့တာပါဦးလေး လို့ ကျမက ပြန်ပြောတော့ သူ့ကို ဗိုလ်မှုးလို့ မခေါ်လို့ ဆိုပြီး ကျမကို ဟိန်းဟောက်ပါတော့တယ်။ ကျမကလည်း ကျမ မမြင်ရပဲ မခေါ်နိုင်ပါဘူး လို့ ခပ်မာမာ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ ကျမရဲ့ အဖေထက်ငယ်မှာ မို့ ဦးလေးလို့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအရ ခေါ်တာဖြစ်လို့ ကျမအပြစ်မရှိဘူးလို့ ထင်ပါတယ် ဆိုတော့ ထပ်မပြောတော့ပါဘူး။ ကျမတို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ရဲ့ စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်တွေ အောင်မြင်မှုအပေါ် မရှုစိမ့်တာကြောင့် ခွင့်ပြုလူဦးရေ ၄၀ ထက်ကျော်လို့ ဆိုပြီး ကျမတို့ အဖွဲ့ မဟုတ်တဲ့ နောက်တဖွဲ့ကို ဖမ်းဆီး လိုက်ခြင်းဖြင့် သူတို့ရဲ့ ယုတ်မာမှုကို ပြသပြီး ဖြစ်နေပါတယ်။
အဲဒီလူကပဲ ဒါဆို ဒီတပ်ထဲက မဲဆန္ဒနယ်မှာရော နင်တို့ အဖွဲ့ မဲဘယ်လောက်ရတယ် ဆိုတာ သိသလား လို့ မေးလာပါတယ်။ သူ့လေသံကို ခနဲ့ တဲ့တဲ့ မေးတယ် ဆိုတာ ကျမ ခံစား သိနေပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ ကျမသိပါတယ် ။ဒီစစ်တပ် မဲဆန္ဒနယ်မှာ ကျမတို့ ခမောက်အဖွဲ့က မဲပေါင်း ၄၄၀ ရရှိခဲ့ပါတယ် ဆိုတော့ အဲဒါ ဘယ်သူတွေ ထည့်တယ် ထင်လဲတဲ့။ ကျမကလည်း မဆိုင်းမတွပါပဲ ။ ဟုတ်ကဲ့ .. ဆေးတပ်လို ပညာရှင် အသိုင်းအ၀ိုင်းက ထည့်တာဖြစ်မှာ ပါလို့ ဖြေလိုက်တော့ ငြိမ်သွားပါတယ်။
နင့်ကို ငါတို့ မရိုက်မပုတ်ပဲ မေးနေတာကို နင်သိတယ်နော်တဲ့။ အဲဒါကို စစ်ကြောရေးမှာ ဘယ်လိုရိုက်တယ် ဆိုပြီး အပိုတွေ ပြောနေတာကို နင်ဘာပြောမလဲတဲ့။ ကျမကို မရိုက်တာ မှန်ပေမယ့် လူမှုဝန်းကျင်သစ် အဖွဲ့ဝင်တွေ ရုံးထွက်တော့ ဖူးယောင်နေတာကို လူတိုင်း မြင်ပါတယ်။ ဒါဟာ လုပ်ကြံပြောဆိုလို့ မရတဲ့ အရာပါလို့ ကျမဖြေတော့ အဲဒီလူက ရယ်တယ်။ ဒါနဲ့ နင်က စစ်ကြောရေးမှာ ဖြေနေတာ ပျော်နေသလိုပဲ ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့။ တဲ့။ ကျမကို ရန်စနေတာ။ ဒေါသထွက်အောင် ဆွနေတယ်ဆိုတာ သတိထားမိပါတယ်။ သူတို့ဟာ စစ်ကြောရေးမှာ သူတို့ကို ဒူးထောက်တောင်းပန်မယ် ငိုပြမယ်လို့ ထင်နေပုံပါပဲ။ ကျမငိုနေတော့ရော လွတ်သွားမှာ မို့လို့လား။ ဒါကို ကျမ သေချာသိတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျမ ငိုစရာ မလိုပါဘူး။ ဒီလိုဖမ်းမယ် စစ်မယ် မျှော်လင့်ပြီးသားပါ။ ကျမ သူငယ်ချင်း အများကြီးလဲ ဒီလမ်းကို ဖြတ်သွားကြတာပါပဲ. လို့ … ကျမ ခပ်အေးအေး ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။
နင်ထပ်စဉ်းစားထားပါ။ နင့်မှာ ဖြေစရာတွေ အများကြီး ကျန်သေးတယ် ဆိုတာ ငါတို့သိတယ် ..တဲ့ ။ နင်က ကလေးဗိုလ် လုပ်နေရတာကို ပျော်နေတာ မဟုတ်လားတဲ့။ ဟုတ်ရင်လဲ ဟုတ်မှာပါ လို့ ပြန်ပြောတော့ တခွန်းမခံ ပြန်ပြောတာ နင့်အကျင့်လား။ ဒီနေ့ ခဏရပ်မယ် ။ မနက်ဖြန် ဆက်စစ်မယ်။ ငါတို့ မေးခွန်းတွေကို သေချာ ဖြေနိုင်အောင် ကြိုးစားပါတဲ့။ နင့်နောက်က လူတွေကို ဖော်ပေးနိုင်မှ နင်ဒီက ထွက်ရမယ်ဆိုတာ သိထားပါတဲ့ စစ်သားရင့်မကြီးက ကျမလို ပိစိကွေး ကျောင်းသူ တယောက်ကို ခြိမ်းခြောက်ဟိန်းဟောက်လို့။
အဲဒီနေ့က စစ်ကြောရေးဟာ အေးအေး ဆေးဆေး ပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ ညနေ တော်တော်မှောင်နေမှ ပြီးသွားတာမို့ ထမင်းကျွေးမယ့် အမတွေက ကျမ ပြန်အလာကို စောင့်နေပါတယ်။ သူတို့က အကြာကြီးပဲနော်လို့ ကျမကို ပြောပြီး ထမင်းစားတာကို ငေးကြည့်နေပါတယ်။ ခုဆို ထမင်းစားချိန်မှာ အခန်းတံခါးကို အကုန်ဖွင့်ပေး ထားတတ်ပါပြီ။ ထမင်း ပန်းကန်ထဲ ထည့်လာသမျှ ကုန်အောင်စားတဲ့ ကျမကို ထည့်ပေးတဲ့ ထမင်းကလည်း တဖြည်းဖြည်း များလာနေတာကိုလဲ သတိပြုမိပါတယ်။ ဒါဟာ ရဲဘော်တွေက ထားတဲ့ လူသားချင်း စာနာစိတ် စေတနာဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
အဲဒီနေ့ညက ကျမ ခိုးနားထောင်နေကျ လျှာထိုးပေါက်ကလေးကနေ နားထောင်နေတော့ ကျမ ခြေထောက်သေးတဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြီး ရယ်မောနေတာတွေကို ကြားရပါတယ်။
ခြေထောက်ကလေးက သေးသေးလေးကွ.. တဲ့။
နောက်တခါ ခေါ်စစ်မယ့်နေ့ကို ကျမ စောင့်မျှော်နေရင်း အိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်။
Posted by ခင်မင်းဇော် at 11:57 AM9comments:
အိပ်မယ် ကြံနေတုန်း တံခါးဖွင့်သံလိုလို ကြားရပြန်ရော ။ ဆက်နားထောင်နေလိုက်တော့လဲ ဘာမှ မဟုတ်ပြန်ဘူး။ အိပ်မက်လား ဘာလဲ ။ ထထိုင်နေလိုက်တော့တယ်။ အခန်းတံခါးကို မြင်ရအောင် တံခါးဖက် ခြေရင်းလုပ်အိပ်နေတဲ့ ကျမအတွက် ခေါင်းရင်းက တံခါးကို လာဖွင့်သလို အသံကြားနေရတာ။ ချက်ကို အပြင်က ဖွင့်ရတဲ့ တပေပတ်လည် တံခါးလေးပဲ။ သံတိုင်တွေ ရှိနေတယ် ဆိုတာ သိပေမဲ့ ဘယ်သူက ဘာလုပ်ဖို့ ဖွင့်သလဲ ။ စဉ်းစားမရဘူး။
ကြောက်လန့်အောင် ခြောက်ချင်တာလဲ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။(အဲဒါ ခြောက်တာလို့ ထောင်ထဲရောက်တော့ အရင်ရောက်နှင့် နေသူတွေက ပြောတယ်။ အော် သူတို့ခြောက်တာကလဲ အဲဒီတုန်းက ကြောက်လဲ မကြောက်မိဘူး) အပြင်မှာ ဘောလုံးကန်သလား ဒါမှမဟုတ် ခြင်းခတ်သလား (၂ခု စလုံးလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်) လူများများနဲ့ အသံတွေ ကြားနေရတယ်။ မနက် ခပ်စောစောပဲရှိဦးမယ်ထင်တယ်လို့ တွေးမိတော့ အခန်းထဲမှာ မှောင်နေပေမယ့်၊ ဒီအဆောက်အဦးမှာ ကိုယ်တယောက်တည်း ရှိနေပေမယ့် မကြောက်ခဲ့ပါဘူး။ အိပ်မရမဲ့ အတူတူ သံဗုဒ္ဓေရွတ်နေတာပဲ အေးတယ်။ နာရီကလည်း ဘယ်နှစ်နာရီဆိုတာ မမှတ်မိလိုက်ရင် သိကို မသိတော့ဘူး။ တနာရီ ဆိုတာကလည်း စောင့်နေသူ အတွက်တော့ တော်တော်ကြာသကိုး။
တညလုံးမအိပ်ခဲ့ရတော့ တဖြည်းဖြည်း အိပ်ပျော်သွားတာပါပဲ။ အဲဒီနေ့က မနက်စာ မစားရဘူး။ ကိုယ်က နေလည်း မကောင်းတော့ အိပ်ချည်းနေလိုက်တာပဲ။ အရင်နေ့လို ထလမ်းလျှောက်တာ၊ ခုန်နေတာတွေလည်း မလုပ်ဖြစ်ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ အပြင်မှာ ထမင်းချက်နေသံတွေ ကြားရတယ်။ သူတို့လဲ မနက်စာ ပဲဟင်းဖြစ်နေတာ များတယ်။ ခုကြားရတဲ့ အသံတွေအရ ညနေစာ ချက်နေတာ ဖြစ်မယ်။ အမလေး ထမင်းစားချင်လိုက်တာ။
ညနေဖက် ရောက်လာပြီဆိုတော့ ညစာ ကျွေးမယ်ထင်ပါတယ် လို့ စဉ်းစားနေတုန်း တံခါးဖွင့်ပြီး ထမင်း ပန်းကန်ရောက်လာတယ်။ ပထမဆုံးနေ့က တွေ့တဲ့ အမတွေပဲ။ ညီမလေး နေမကောင်းလို့ဆို .. ရဲဘော်တွေက သူတို့ စကေးထဲက ပိုထည့်ပေးထားတယ်တဲ့။ ဟုတ်ကဲ့လို့ပဲ ပြောပြီး ထမင်းပန်းကန်ဆွဲစားလိုက်တော့တယ်။ ပဲဟင်း ပန်းကန်ကို အလယ်မှာ မထားပဲ ဘေးမှာ တင်ထားတယ်။ ဇွန်းနဲ့ ထမင်းကို မွှေလိုက်တော့ အလယ်မှာ အမဲသား တတုံးကို စမ်းမိတယ်။ ထမင်းတွေနဲ့ အုပ်ထားတဲ့ ဟင်းတုံးကို ဘာမှ မပြောပဲ ခပ်ငြိမ်ငြိမ်ပဲ စားနေလိုက်တယ်။ တံခါးတ၀က်ဖွင့်ထားပြီး အပြင်က စောင့်နေတဲ့ အမတွေ မျက်နှာက စိတ်မကောင်းပဲ စောင့်ကြည့်နေရတဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့။ ကျမ မျက်နှာက တော်တော် နီနေတယ်တဲ့။ အဲဒီအမ ၂ ယောက်က ပြောသွားတယ်။ မနက်ဖြန် အစောင့် အဖွဲ့ လဲမှာတဲ့။ တပတ်တဖွဲ့ လဲတာတဲ့။ သူတို့ တိုးတိုး ပြောပြပေးသွားတယ်။ အော် ဒါ့ကြောင့် ထမင်း ပြင်ပေးသူက နှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ ဟင်းတတုံး ထည့်ပေးသွားတာကိုး။
ဘာလိုလဲ မေးလို့ တောင်းလိုက်တဲ့စောင်လဲ လာမပေးသေးဘူး။ ဒီဇင်ဘာ ဖြစ်သွားလေ ပိုအေးလေ ထင်ပါရဲ့။ ချမ်းတာ အိပ်လို့မရဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ ထခုန်နေလိုက်တယ်။ စိတ်နည်းနည်းတိုတာကနေ များများတိုတာထိ တက်လာပြီ။ တံခါးကို ခြေထောက်နဲ့ ကန်ချင်လာသလိုပဲ။ နေဦး ခုကတည်းက ကန်ရင် မခံနိုင်သူ ထင်နေဦးမယ်။ မကန်သေးဘူး။ ကြိုးမပါပေမဲ့ ကြိုးခုန်သလို ခုန်နေလိုက်တယ်။ ချမ်းတာ သက်သာအောင်ပေါ့။ အေးတာကတော့ အခန်းထဲ နေတာတောင် တော်တော်အေးနေတယ်။ အချမ်းလဲ မသက်သာပါလား။ ခုန်လိုက်တော့ မောလာတယ်။ စိတ်တိုလေ မြန်မြန်ခုန်မိလေ။ ဟိုက်… ဖိနပ်တဖက် ပြတ်သွားပြီ။ ပါလာတဲ့ စိန်ဒါးမောက် ခြေညှပ်ဖိနပ် ပါးပါးလေးက ဒီလောက် ခုန်တာလေးတောင် မခံပါလား။ ကဲ .. ဖိနပ်မရှိလဲ ခြေဗလာနဲ့ပေါ့။ ဘာခက်လို့လဲ ။ ဘယ်မှလဲ သွားရတာမှ မဟုတ်တာ။
မောမောနဲ့ အိပ်လိုက်တာ နိုးလာတော့ မနက်ဘယ်အချိန်လဲတောင် မသိတော့ဘူး။ တံခါးဖွင့်ပြီး မနက်စာ လာကျွေးမယ့်သူကိုပဲ မျှော်နေလိုက်တော့မယ်။
ဒီနေ့တော့ ထမင်းက ခပ်စောစော ရောက်လာတယ်။ အဖွဲ့အသစ်ပြောင်းတော့ ရဲဘော်တွေ စောစောစားတတ်တဲ့လူ များလို့ထင်တယ်။ ဟင်းကတော့ ပဲဟင်းပဲ။ ထူးခြားတာက ထမင်းလာပို့တဲ့ အမတွေ နောက်က စစ်သားလေးတွေ ၀င်လာကြည့်တာပဲ။ သူတို့ ၀င်လာတာကို ထမင်းစားနေရင် မြင်ရတယ် ။ ဒီနေ့ တံခါးကို ကျယ်ကျယ် ဖွင့်ပေးထားတယ်။
ရေဗူးကိုရေဖြည့်ခိုင်းတော့ ရဲဘော်လေးတယောက် လာပို့တယ်။ သူတို့ အကျီ င်္က လက်မောင်း တံဆိပ်ကို ကြည့်တော့ ဆေးတပ် တံဆိပ်နဲ့။ ဒါကြောင့် သူတို့က နည်းနည်း ပျော့ပျောင်း နေသကိုး လို့တွေးမိတယ်။ ဒါမဲ့ ဖျားနေသူကို ဆေးလဲ လာမပေးဘူး။ စောင်လဲ လာမပေးဘူး။ စကားပြောမယ့်လုမရှိ။ အော် … အမှောင်ခန်းထဲမှာ ဒီတိုင်း ဘယ်နှစ်ရက် ထားမယ်မသိ။
အဖျားက မကျဘူးထင်တယ်။ ခေါင်းတောင် မထောင်နိုင်တော့ဘူး။ ထမင်းလာပို့တဲ့ အမက မနေ့ညနေစာ အများကြီး ပြန်ပါသွားတာ သတင်းပို့ပေးထားတယ်တဲ့။
နေ့လည်ဖက် တံခါးခေါက်ဖွင့်သံတွေ ကြားရတယ်။ ဒီဇင်ဘာဆောင်းရဲ့ နှိပ်စက်မှုက လူကို နာလန်မထူအောင် လုပ်ထားတာပဲ။ ထကို မထနိုင်တော့ဘူး။ ချမ်းတာလဲ အရမ်းပဲ။ ကိုယ့်အိမ်မှာ နေတုန်းက မချမ်းသလိုနဲ့ ခုတော့လဲ အရိုးထဲ စိမ့်အောင် အေးသကိုး။ အေးတော့ ညဖက် အိပ်လို့ မရ။ ထထ ခုန်နေတော့ လူက နေကောင်းဖို့ အားမရှိသလို ဖြစ်နေတာ ထင်ပါရဲ့။ ဒီတိုက်ခန်းတွေက နေ့လည်ဖက်လဲ အအေးကမလျော့။ လူသစ်ရောက်လို့လားလို့ အသံကို နားစွင့်လိုက်တော့ ကိုယ့်အခန်းတံခါးသော့ဖွင့်သံ ထပ်ကြားတယ်။ လာခေါ်တာလား။ ထထိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတုန်း အခန်းအပြင်က တစုံတခု ပစ်သွင်းလိုက်တာ မြင်လိုက်ပြီး တံခါးပြန်ပိတ်သွားတယ်။ ဘုတ်ကနဲ့ ကျလာတဲ့ အရာက သက္ကလပ်စောင်လိုပဲ ခပ်လေးလေးနဲ့ စောင် ၂ ထည်ဖြစ်နေတယ်။ အမလေး … ၀မ်းသာအားရ ခပ်ကျဲကျဲခင်းထားတဲ့ ကွက်ပျစ်ပေါ်ကို တထည်ခေါက်ခင်းလိုက်ပြီး နောက်တထည်ကို အမြန်ခြုံလို့ အိပ်ပစ်လိုက်တော့တယ်။ အိုး .. စောင်တထည်ရဲ့ တန်ဖိုးကို ကျမသိပါပြီ အသင်…လောက…..။
အဲဒီနေ့က နေ့လည်ဖက် ခါတိုင်းနေ့တွေလို နာရီသံကို စောင့်ရေတဲ့အလုပ် မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။ နွေးနွေးထွေးထွေး အိပ်လိုက်ရတော့ ခါတိုင်းလို ထမင်းဆာလို့ စောင့်နေရတာမျိုးလဲ မဖြစ်တော့ပဲ ညနေထမင်း လာကျွေးချိန်မှ ထဖြစ်တော့တယ်။ လူကလည်း လန်းဆန်းသွား သလိုပဲ။ ဒီစောင်တွေဟာ အမိန့်အရ ရောက်လာသလား။ ဒါမှ မဟုတ် ကင်းစောင့် ရဲဘော်တွေက ပေးထားတာလား ကျမ မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ စောင်တွေက အသစ်မဟုတ်သလို လူခြုံထားလက်စ စောင်တွေ ဆိုတာတော့ ကျမသိနေတယ်။
အဲဒီညနေ ထမင်းကို ဘဲဥ ကုလားဟင်းနဲ့ ကျွေးတာတော့ မှတ်မိနေတယ်။ ဘာ့ကြောင့်ဆို အိပ်ရေး၀၀ အိပ်လိုက်ရလို့ လန်းဆန်းနေတဲ့အချိန်မှာ ဘဲဥကုလားဟင်းနဲ့ ထမင်းစား ကောင်းခဲ့တယ် ဆိုတာကို အမှတ်တရ အရှိခဲ့ဆုံးမို့ပါပဲ။ ထမင်းလာပို့တဲ့ အမတွေက ၂ တွဲပဲ အလဲအလှယ် လုပ် ပို့တော့ ကျမနဲ့ တော်တော်သိနေပြီ။ သူတို့ အချင်းချင်း ကျမအခန်းအပြင်မှာ စောင့်နေတုန်း ပြောတဲ့ စကားအရ အခုသူတို့ လူကြီးတွေ မအားဘူး ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ရောက်နေကြောင်းတွေ သိရတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျမကို တရက်ပဲခေါ်စစ်ပြီး နောက်ရက် ခေါ်မစစ်နိုင် ဖြစ်နေတာကိုး ။
သူတို့ ကျမကိုတော့ သိပ်စကား မပြောရဲကြဘူး။ ကျမလဲ သူတို့ပြောစကားတွေ ခိုးနားထောင်တဲ့ အကျင့် ရလာတယ်။ အင်မတန်နားလေးတတ်တဲ့ ကျမလဲ ခုဆို လျှာထိုးပေါက်ကလေးကနေ အပြင်က ရဲဘော်တွေ စကားကိုတောင် ခိုးနားထောင်တတ်နေပြီ။ သူတို့စကားသံကြားနေရမှာ လူတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အသိကို ကျမရနိုင်တယ်။ စကားမပြောရပဲ အမှောင်ခန်းထဲမှာချည်းနေရတဲ့အခါ တော်တော်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာ တပတ်ကျော်ကျော် နေချိန်ရဲ့နောက်မှာ ခံစားလာရတယ်။ တယောက်တည်း ဘုရားစာ ဆိုတာတောင်မှ အသက်မ၀င်ဘူး။ တရားမှတ်ဖို့ကိုလည်း စိတ်ကတည်လို့မရဘူး။ ကိုယ်တိုင်က သမာဓိအား နည်းတာလဲ ပါမှာပေါ့။ ရေမချိုးရတာ ။ ခေါင်းမလျှော်ရတာ။ မနက်မိုးလင်းရင် ရေနဲ့ ပဲ ပလုပ်ကျင်းနေရပြီး သွားမတိုက်ပဲနေရတာ၊ မျက်နှာကို ရေနည်းနည်းနဲ့ ဆွတ်ရုံပဲ ဆွတ်နေရတဲ့ အခါ။ အကျီ င်္တထည် ထမိန်တထည်ထဲနဲ့ ချွေးထွက်လိုက် ပြန်ခြောက်လိုက် ဒီလိုပဲ နေရတဲ့အခါ ဘယ်လိုပဲ တောင့်ခံလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားပေးနေပေမယ့် ဒေါသထွက် နေမိတာ အမှန်ပါပဲ။ သူတို့ ဒီလို လုပ်နေတာတွေဟာ ဆဲတာထက် ပိုဆိုးတယ် ဆိုတာ သူတို့သိမှာပါ။ ဒါဟာ သက်သက်မဲ့ ခံစားစေတယ် ဆိုတာလည်း သိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စိတ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ဆွဲဆန့်ထား။ တည်ငြိမ်အောင်လုပ်။ တခုခုကို စဉ်းစား အသေးစိတ်တွေး… ။ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကို ပြန်ထိန်းနိုင်အောင် လုပ်ရတာလောက် ခက်တာ မရှိပါဘူး။ ကျောင်းတုန်းက ဇာတ်လမ်းတွေ ပြန်စဉ်းစား ။ တချို့ကို စိတ်ကူးနဲ့ ကိုယ်ရေးချင်သလို ၀တ္ထုရေး။အင်း … ကောင်းနေတာပဲ။
လူက အိပ်နေရင်း အလုပ်မရှိတော့ နာရီသံကို လိုက်မှတ်ဖို့ စက္ကန့် မှန်အောင် တစ်နှစ်သုံးလေးကို မှန်မှန်အော်ရင်း နာရီဝက်ကို ၁၈၀၀ ထိရောက်အောင် ခေါ်ကြည့်တယ်။ ကျမ ၁၈၀၀ မှာ နာရီဝက် သံချောင်းခေါက်ချိန် တခါမှ မတိုက်ခဲ့ဘူး။ ဟားဟား အမြဲ စိတ်မြန်တဲ့ ကျမက စောနေတတ်တယ်။
ဒီတိုင်းအိပ်နေရင် ကိုယ့်နှလုံးခုန်သံကို ပြန်ကြားနေရတဲ့ထိ တိတ်ဆိတ်နေတတ်တယ်။ နားကျပ်နဲ့ နားမထောင်ပဲနဲ့ ကြားနေရတဲ့ လူတယောက်ရဲ့ တဒိတ်ဒိတ် နှလုံးခုန်သံဟာ ဒီလောက် ကျယ်လောင်လိမ့်မယ်လို့ အစတုန်းက နည်းနည်းမှ မစဉ်းစားခဲ့မိဘူး။ ဒါ့ကြောင့် တချို့တွေ စိတ်ဖောက်ပြန် သွားတတ်တယ် ဆိုတာကို လက်ခံရမယ်။ သူတို့က နည်းမျိုးစုံနဲ့ စိတ်ဓါတ် စစ်ဆင်ရေး လုပ်နေတာဖြစ်မယ်။ နေ့လည်ဖက်တွေ မအိပ်ချင်ဘူး။ နေ့လည်ဖက် အိပ်မိလို့ ညဖက် မအိပ်နိုင်ရင် တိတ်ဆိတ်ဒဏ်ကို ပိုခံရမှာ စိုးလို့။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ စိတ်ကို နေတတ်အောင် နေရမယ် ဆိုတာကို ပိုလို့နားလည် လာတယ်။ ချုပ်တည်းထားရင် ပိုဆိုးမယ်။ အရမ်းလွတ်သွားရင်လဲ မဖြစ်သေးဘူး။ လူက စကားပြောချင်စိတ်နဲ့ အသံတွေ ကြားချင်စိတ် ဖြစ်နေမိတယ်။
တနေ့တော့ သီချင်းတပုဒ်ကို အကျယ်ကြီး အော်ဆိုပစ်လိုက်တယ်။ မှတ်ကရော…။ နောက်ဖက်က တပေပတ်လည် တံခါးကို လာဖွင့်တယ်။ အလင်းရောင် ၀င်လာတော့ တော်တော်ပျော်သွားတယ်။ လူတယောက်ခေါင်း ပေါ်လာပြီး ဘာဖြစ်လို့လဲ တဲ့။
ပျင်းလို့ သီချင်းဆိုတာလေ ဆိုတော့ အော် .. ဆိုပြီး ဘာပြောရမှန်း မသိဖြစ်သွားပုံပဲ။ ဒီအခွင့်အရေးကို စကားပြောချင်နေတဲ့ ကျမက လက်လွတ်မခံနိုင်ဘူးလေ။ ဒါနဲ့ ဒီထဲမှာ ကျမ တယောက်တည်းလားလို့ မေးလိုက်တယ်။ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ ဟိုဘက် တိုက်ထဲမှာလည်း တယောက်ရှိသေးတယ်။ သူက ခင်ဗျားကို သိတယ်တဲ့။ ဟိုက်….. ဘ ယ်သူလဲ ။ ယောက်ျားလား မိန်းမလား .. နာမည်ဘယ်သူလဲ.. တကယ့်ကို အငမ်းမရ ကျမမေးမိတယ်။ နောက်ထပ် ဒီလို တိုက်တတိုက်ရှိနေသေးတာ မသိခဲ့ဘူး။ ခုသူပြောလို့ ကျမသိလိုက်ရတယ်။
Posted by ခင်မင်းဇော် at 6:42 PM6comments:
Posted by ခင်မင်းဇော် at 7:33 AM2comments:
Posted by ခင်မင်းဇော် at 9:42 PM4comments:
ဘ၀မှာ ရေးချင်ခဲ့တဲ့ စာတွေ။ ပြောပြချင်တဲ့ စကားတွေကို ဖတ်ပေး နားထောင်ပေးမယ့် ပရိတ်သတ်ကို ဒီဘလော့လေး လုပ်နေရင်းက ရရှိခဲ့ပါတယ်။ တခါတခါ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ တွေ ၊ ထမင်းစားရဖို့ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေကို ၀တ်ကျေတမ်းကျေ မလုပ်ပဲ စိတ်ပါလက်ပါ ကိုယ်ဖိရင်ဖိ လုပ်ရတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ဘလော့လေး ရှင်သန်စေဖို့ စာတွေ မရေးနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ အသစ်မတင်နိုင်တဲ့ ဘလော့တခုကို ၂ ခါ ၃ ခါထက် ဘယ်သူက လာကြည့်ဖြစ်မှာလဲနော်။ ဒါကြောင့် တတ်နိုင်သလောက် အချိန်ကို ချိန်ဆရေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ရတယ်။
ဘ၀မှာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ပြန်ရေးဖို့ အားစိုက်ရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ဖော် မသူတော် ဖြစ်မှာလည်း စိုးရိမ်ရသေးတယ်လေ။
ပန်းပဲဖိုတခု သို့မဟုတ် ခိုင်မာခြင်းနောက်ကွယ်မှ သိမ်မွေ့မှု
ကျမ ဘ၀ထဲမှာ ဘယ်လိုမှ မမေ့နိုင်ခဲ့တဲ့ စစ်ထောက်လှမ်းရေး ရဲ့ အမှောင်ခန်းထဲက ၂၈ ရက်ကို ပြန်လို့ ပြောပြချင်ပါတယ်။ ပြန်ပြောပြနိုင်တဲ့ ခုလိုအချိန်မှာသာ ၂၈ ရက်ဆို ခဏလေး လို့ တွေးလို့ရပေမဲ့ တကယ်ကြုံတွေ့နေတဲ့ အချိန်တုန်းက ဘယ်တော့ ဒီနေရာက ထွက်ခွာရမယ် ဆိုတာ မသိလေတော့ တော်တော်ကြာခဲ့တဲ့ အချိန်ကာလတခုပါပဲ။
၁၉၉၀ ခု နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ ကျမရဲ့ အိမ်ကို ယူနီဖောင်းဝတ်ဒုရဲအုပ်၊ ရဲသားတွေနဲ့အတူ သာမန် အရပ်ဝတ်နဲ့ ပေမဲ့ ကျမတို့က သူ့ကို စစ်ထောက်လှမ်းရေးလို့ သိနေတဲ့ တပ်ကြပ်ကြီးတယောက် ၊ ရပ်ကွက်လူကြီး တွေနဲ့ ရောက်လာခဲ့တယ်။ အချိန်က တော်တော်စောပါသေးတယ် ။ ည ၈ နာရီကျော် လောက်ပဲ ရှိဦးမယ် ထင်ပါတယ်။ အိမ်တအိမ်လုံး အပေါ်ထပ် အောက်ထပ် အကုန်မွှေနှောက် ရှာဖွေနေတာကို ကျမက ဒီတိုင်း ထိုင်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ ကျမ ထိုးနေကျ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံ။ ခမောက်ပုံ စတာတွေပါတဲ့ ရင်ထိုးတံဆိပ်တွေ ၊ နောက်အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် အာဇာနည်မျိုး သေရိုးမရှိ လို့ စာတမ်းပါတဲ့ ရင်ထုိးတံဆိပ်တွေ ထည့်ထားတဲ့ ဗူးကို ဖွင့်ကြည့်တဲ့ ဒုရဲအုပ်ကလေးက အသာဖွင့်ကြည့်ပြီး မသိသလို ချထားလို့ …. နောက် ဒီအပေါ်ရှာ ပြီးပြီလို့ အသံထွက်ပြောလိုက်တယ်။
ကျမအဖေ၊ ကျမအမေ ၊ မောင်လေး ၊ ညီမလေး သူတို့အားလုံး ကျမဒီအလုပ်တွေ လုပ်မယ်ဆုံးဖြတ်ကတည်းက ဒါမျိုးကြုံလာနိုင်တယ် ။ ဒါကို ခံစားနိုင်ရင်လုပ်ဆိုတဲ့ စကားကို ခေါင်းညိတ်ပြီး လုပ်ခဲ့တာမို့ အားလုံးက အေးဆေးပါပဲ။ မျက်နှာတောင် မပျက်ကြဘူး။(အားရှိစရာ)
နောက် အန်တီစု ဘာသာပြန်ထားတဲ့ if ကဗျာ ဘာသာပြန်စာအုပ်။ အဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်တဲ့ ဂျာနယ်တွေ ထပ်ထားတဲ့ အပုံကို ရှာပြန်တယ်။ ဖူးချစ်ရဲ့ ကြိုးစင်ပေါ်က မှတ်တမ်းကို သေချာ လှန်ပြီး နည်းနည်းတောင် ဖတ်နေသေးတယ်။ သိန်းဖေမြင့်ရဲ့ အရှေ့ကနေ၀န်း ထွက်သည့်ပမာ၊ …… အောင်သန်းရဲ့ အောင်ဆန်းကို တွေ့တော့ သူမနေနိုင်ဘူး။ ဒီစာအုပ်တွေက အပိုင်လားတဲ့။ ကျမက အင်းလို့ မဖြေချင့်ဖြေချင် ဖြေပေးလိုက်တော့ သူခေါင်းညိတ်တယ်။ ပြီးတော့ ထောက်လှမ်းရေး တပ်ကြပ် အပေါ်ရောက်နေတုန်း ကျမကို if ကဗျာ စာအုပ် သူ့ကို ပေးဖို့ တိုးတိုးလေး လာတောင်းတယ်။ ကျမ ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်တော့ သူ့ အနွေးထည် အကျီင်္ အိတ်ထဲကို အမြန် ထိုးထည့်လိုက်တယ်။ (အဲဒီ ဒုရဲအုပ်က ကျမ ထောက်လှမ်းရေးကနေ ထောင်ကိုရောက်၊ ထောင်ဝင်းထဲက ထောင်စာကြည့်တိုက်က အထူးရုံးခန်းမှာ အမှုစစ်တော့ သူပဲ တာဝန်ကျတာကို တွေ့ရတယ်။ ကျမထောင်က လွတ်တော့ အမြဲတမ်း သူတို့ လင်မယားကို အပြင်မှာ တွေ့ရင် နှုတ်ဆက်ဖြစ်တယ်။ ဒုတိယအကြိမ် အဖမ်းခံရတော့လည်း သူ့ကို ဆုံတွေ့ရသေးတယ်။ သူက အံ့သြလို့။ နောက် ၀မ်းပန်းတသာ နှုတ်ဆက်တယ်)
ကျမကို စစ်စရာရှိလို့ ခဏခေါ်သွားမယ်ဆိုတော့ ကျမက အနွေးထည် ဂျာကင်ကို ထပ်ဝတ်ပြီး အသင့် ထည့်ထားတဲ့ ရေဗူးနဲ့ သွားတိုက်တံသွားတိုက်ဆေး ဘာဘာညာညာထည့်ထားတဲ့ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကို လှမ်းဆွဲတော့ အဲဒီထောက်လှမ်းရေး တပ်ကြပ်က တအံ့တသြကြည့်တဲ့ အကြည့်ကို ခုထိမှတ်မိသေးတယ်။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် သိတယ်ပေါ့လေ ဆိုတဲ့အကြည့်လို့ ကျမက ဘာသာပြန်တယ်။ လေသံပျော့ပျော့လေးနဲ့ သိပ်ကို နံတဲ့ကြောင်ချေးလို ကောင်ဆိုတာ ကျမတို့က သူ့ကို သိထားပြီးသား၊ မသိလို့ရောရမလား။ ကျမတို့ အဖွဲ့သားတွေ တော်တော် ဖမ်းခံထားရပြီလေ။ ပြီးတော့ ဘယ်လူက ဘယ်လောက်မာတယ် ပျော့တယ် ဆိုတာလည်း သိလိုက်ရတယ် ပြောရင် မလွန်တဲ့အခြေ ဖြစ်နေတယ်။ ကိုယ့်အဖွဲ့သားတွေထဲက ဘယ်သူ ဖော်လိုက်နိုင်တယ် မသိပေမဲ့ သူတို့ဆီမှာ ရှိနေတဲ့ အချက်အလက်အရ စာရင်းဇယားအရ ကျမကို ဖမ်းကို ဖမ်းရမယ်ဆိုတာ အဖမ်းခံရပြီးမှ သိတယ်။
တကယ်တော့ ကျမက လွတ်နေပြီးသား။ ဒါကို အရင်အဖမ်းခံထိတဲ့ လူတွေ အမိန့်ချပြီးပြီ ။ နင်နဲ့ မဆိုင်ဘူး ပြန်လာလို့ရတယ်တဲ့ ၊ အဲလိုပြောတာ အရွေးချယ်ခံထားရတဲ့ အမတ်ကပြောတာ။ အော် သူပြောတော့လဲ ယုံမိတာပေါ့။ အသက် ၂၅ နှစ်ဆိုပေမယ့် နိုင်ငံရေးပါးက သိပ်ဝသေးတာမဟုတ်ဘူး။ မခံချင်စိတ်နဲ့ မဆလကို ဆန့်ကျင်ရင် န၀တနဲ့ ထိပ်တိုက် တွေ့ရတော့တာကိုး။ ကျမသူငယ်ချင်းတယောက်က ကျမပုန်းနေတဲ့ဆီကို သတင်းစကား လာပို့ပေးရသူ။ ကျမအဖမ်းခံရတော့ သူက စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့။ သူပြောလို့ ကျမပြန်လာတာလို့ အမြဲပြောပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေသူ။
ကျမကို ခေါ်သွားပြီး အဲဒီတုန်းက အက်စ်ဘီ လို့ ကျမတို့ခေါ်တဲ့ ရဲထောက်လှမ်းရေး ရုံးအပေါ်ထပ်မှာ တညလုံး မအိပ်ရဘူး။ သူတို့ တယောက်တလှည့်မေးနေတာ။ မသိဘူးလေ ။ ဟုတ်လား ဆိုတာတွေ တညလုံး ထိုင်ဖြေနေရတဲ့အဖြစ်။ နင်ဒီမှာ ကောင်းကောင်းမဖြေရင် ဒါ့ထက်ဆိုးတဲ့နေရာ ရောက်သွားမယ်နော်တဲ့။ ရောက်ဖူးတာပေါ့ လို့ ကျမက ပြောတော့ တော်တော် ဒေါသထွက်သွားပုံပဲ။ စားပွဲပေါ်ကို ထုလိုက်သေးတယ်။
ယောက်ျားတွေအများကြီးက အဲဒီတုန်းက ပိန်ပိန်လေးဖြစ်တဲ့ကျမကို ဒေါသထွက်နေတာများ ရယ်ချင်စရာကြီး။ ကျမက ရယ်တော့ ဘာရယ်တာလဲတဲ့။ မသိဘူး ရယ်ချင်လို့ ဆိုတော့ ပိုဒေါသ ထွက်နေကြသေးတယ်။ ကျမသိတာတွေ မသိတာတွေ အားလုံး စုရေးထားပုံရတဲ့ စာအုပ်တအုပ်ကိုလည်း ဖတ်ပြကြသေးတယ်။ ဟုတ်ရင် ဟုတ်တယ် ။ မဟုတ်ရင် မဟုတ်ဘူးဖြေတဲ့။ အင်း .. ဖြေရတာပေါ့ လို့… ။ အဲဒီတုန်းက အင်မတန် စိတ်ဓါတ် တက်ကြွပြီး အင်မတန် မာနေတဲ့ အရွယ်ကိုး။ ကြောက်စိတ်က မရှိဘူး။ လာထားပေါ့ ဆိုတဲ့ စိန်ခေါ်ချင်တဲ့ မာတောင့်တောင့် မျက်နှာပေးတော့ ရှိနေလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ သူတို့ကလည်း အဲဒါကို ချိုးချင်ပုံပါပဲ။
ပျို့သာကီနွယ် ဆိုတာနင်လားတဲ့။ မဟုတ်ဘူး။ ဒါဆို ဘယ်သူလဲတဲ့ ၊ မသိဘူးလေ လို့ ကျမကဖြေတော့ … အော် ပြန်ရော… သူတို့ရှေ့က စာအုပ်ကို ကျမကို ထိုးပြတယ်။ အားပါးပါး… ကျမတို့ ဗကသ တိုင်းစာရင်း ၊ မြို့နယ်စာရင်း တန်းစီရေးထားတယ်။ နာမည်ရင်းတွေ မဟုတ်ဘူးလေ။ နာမည်ဝှက်တွေချည်းပဲ။ ကိုယ့်ဖာသာတော့ ကိုယ် သိတာပေါ့။ ဘယ်သူက ဘယ်ကောင်ဆိုတာ။ ဒါမဲ့ သူ့ကို ဘာတွေလဲ လို့ ပြန်မေးတာပေါ့။ တကယ်က ကျမသိတယ် သူတို့ က ရေးထားတဲ့ လက်ရေးကို မသဲကွဲတာ ။ မျိုးသာကီနွယ် လို့ နာမည်ဝှက်ပေးထားတာ ကျမကိုယ်တိုင်ပဲ။ ဟားဟား… ကျမလိမ်တာမှမဟုတ်တာနော်။ ပျို့သာကီနွယ်ဆိုတော့ မသိဘူးလေ ။ အဲဒီနာမည် တလုံးတည်းနဲ့ ကျမတို့ မိုးလင်းသွားတယ်။
မိုးလင်းတော့ ရဲမေ ၂ ယောက် ရောက်လာတယ်။ ကျမက ဒီမြို့ သူစစ်စစ်ဆိုတော့ ရောက်လာတဲ့ ရဲမေ ၂ ယောက်စလုံးက အသိတွေ။ ကျမထက်နည်းနည်း ငယ်တယ်ဆိုပေမဲ့ အထက်တန်း တကျောင်းတည်း။ ၂ နှစ်လောက်ပဲ ကွာတာဆိုတော့ သူတို့ကျောင်းပြီးတာနဲ့ ရဲမေသင်တန်းတက် ရဲမေဖြစ်နေတာတွေ။ ကျမက သူတို့ကို ငယ်နိုင်လိုဖြစ်နေတာ သူတို့သိပုံမရဘူး။ ဟိုကလည်း ခပ်တည်တည်နေပြီး ကျမက အိမ်သာသွားမယ်ဆို လိုက်ပို့ခိုင်းရော။ ရုံးခန်းထဲမှာ အိမ်သာမရှိဘူး။ နည်းနည်း သွားရသေးတော့ လမ်းမှာ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ အမ။ အိမ်ကိုဘာမှာမလဲတဲ့။ ငါ ဒီမှာဆိုတာပဲ အကြောင်းကြားပေးလိုက်။ ဘယ်ကိုပို့ဦးမယ် မသိဘူးလို့ ပြောလိုက်တယ်။ ဒီနေ့ တနေ့လုံး နင်တို့ငါနဲ့နေရမှာပဲ ။ နေရာပြောင်းတာနဲ့ အကြောင်းကြားပေး သိလားလို့ ပြောထားလိုက်တယ်။ အမ ဘာစားမလဲတဲ့။ ပို့ချင်တာပို့ စားမယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။
ရုံးခန်းထဲ ပြန်ရောက်တော့ ကျမကို ထိုင်ခိုင်းထားတဲ့ ကုလားထိုင်မှာ ထိုင်နေတယ်။ ညက ကျမကို စစ်တဲ့လူတွေ တယောက်မှ မရှိတော့ဘူး။ နောက် ဗိုက်ဆာတယ်လို့ ကျမပြောတော့ အဲဒီရဲမေတွေကို သွားဝယ်ခိုင်းတယ်။ သူတို့သွားဝယ်တဲ့ရုံးဝန်းထဲက ဆိုင်ကလဲ ကျမကို သိတာကိုး။ ကျမအတွက်ဆိုတော့ လဘက်ရည်ကလဲ ၂ ခွက်စာလောက် ။ မုန့်တွေကလည်း စုံလို့ ။ ရဲမေတွေက သယ်လာတော့ ဟဲ့များလှချည်လားတဲ့။ အင်း .. ဆိုင်က ဒီအမကို အလကားပေးလိုက်တာ ။ သူတို့နဲ့ အသိဆိုလို့ ဆိုပြီး ရဲမေတွေက ပြောပြတယ်။ အင်း သူတို့ သိပ်မကျေနပ်ပုံပဲ။ ကျမကတော့ အီကြာကွေးတွေရော ပဲပလာတာတွေရော အပြတ်တီးပစ်တာ။ နောက် ဘယ်အချိန် စားရမယ် မသိတော့ စားရတုန်း အပြတ်တွယ်တာပဲ။ ကြားဖူးနားဝရှိထားတာက ရောက်ရောက်ချင်း စစ်ကြောရေးမှာ ထမင်းမကျွေးဘူး ဆိုတော့ ဒီကနေ စစ်ကြောရေး ဘယ်အချိန်သွားရမယ် မသိတဲ့အချိန်။ သွားကိုသွားရမယ်ဆိုတာလည်း သိနေတဲ့အချိန်။ စားတော့တာပေါ့လေ…. တကယ်ဆိုင်ကပေးသလား သူတို့ပဲ ၀ယ်လာသလား မသိပါဘူး။ ခုချိန်ထိလဲ အဲဒါကို မမေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။
အဲဒီနေ့ခင်းမှာတော့ ကျမကို ရဲအချုပ်ကို ပို့လိုက်တယ်။ ပျော်တာပေါ့။ ရဲအချုပ်မှာ အထက်တန်းကျောင်းက ဖမ်းထားတဲ့ကလေး ၁၀ ယောက်လောက်က ရောက်နှင့်နေပြီးသား။ သူတို့ယောက်ျားလေး ၁၄ နှစ် ၁၅ နှစ် ကလေးတွေကတော့ အချုပ်ဆောင်ထဲ မနေရဘူး။ ရဲစခန်းဝင်းထဲမှာ စားပွဲခုံတွေ ခုံတွေချပြီး ပျော်ပွဲစားလားမှတ်ရတယ်။ မိဘတွေက ထမင်းချိုင့်တွေနဲ့ လိုက်လာ၊ အားပေးတဲ့လူတွေက အများကြီး လဘက်ရည်ထုပ်တွေ မှပုံလို့။ ကျမ ရောက်သွားတော့ မိန်းမအချုပ်ခန်းထဲ ထည့်လိုက်တယ်။ အထဲမှာ ရောက်နှင့်နေတာက ချဲမှုနဲ့ ကျတဲ့ ကောင်မလေး တယောက်နဲ့ အဒေါ်ကြီးတယောက်။ ကျန်တာက ၃(ခ) လို့ ကျမတို့ခေါ်တဲ့ ပြည့်တန်ဆာမှုနဲ့ ဖမ်းထားတဲ့ မိန်းမတွေ ။ သူတို့ထဲမှာ တန်းစီးဖြစ်နေတဲ့ မိန်းကလေး တယောက်က ကျမ နိုင်ငံရေးမှုနဲ့ ကျလာတာဆိုတော့ နေရာစီစဉ်ပေးတယ်။ အဲဒီတယောက်က ကျမ ထောင်ကျနေတဲ့ ၂ နှစ်အတွင်း ထောင်ထဲကို ၄ ခေါက်ထက်မနည်း ၀င်လိုက်ထွက်လိုက်။
နောက်အဲဒီအချိန်က ရဲစခန်းမှာ ခံဝန်လက်မှတ် နေ့တိုင်း လာထိုးနေရတဲ့ ကျမသူငယ်ချင်း ယောက်ျားလေး တယောက် မိန်းကလေးတယောက်ရှိတယ်။ သူတို့က လက်မှတ်ထိုးဖို့ စခန်းမှုး အခန်းထဲမ၀င်ခင် ကျမကို လာစကားပြော။ နောက် လက်မှတ်ထိုး။ ပြန်ထွက်လာတော့ ကျမကို ၀င်နှုတ်ဆက်နဲ့ သူတို့ ကြည့်မရတော့ဘူး ထင်ပါ့။ နောက်နေ့တွေမှာ ကျောင်သင်ပုန်းကြီးနဲ့ သံတိုင်တွေရှိနေတဲ့ အ၀င်ပေါက် ကို လာပိတ်ထားပြီး လက်မှတ် လာထိုးသူကိုလည်း ကျမဆီ လာခွင့်မပေးတော့ဘူး။
ဖမ်းထားတဲ့ ကလေးတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီလို့ သတင်းကြားရပေမဲ့ ကျမကို ထပ်လာမခေါ်တော့ပဲ ဒီအခန်းထဲမှာ ထည့်ထားတာ ၅ ရက်ရှိသွားပြီ။ အိမ်ကလာပို့တဲ့ ထမင်းစားပြီး ရဲစခန်းထဲက တနေ့တာကို နားဆင်။ ညဖက် တာဝန်ကျ ရဲစာရေးတယောက်နဲ့ ချဲမှုနဲ့ဖမ်းလာတဲ့ ကောင်မလေးတယောက် ဇာတ်လမ်းကလဲ မကြည့်ချင်ပဲ မြင်နေရ။
လူတွေမှာ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိတယ်။ အမှန်တရားကိုပဲ လုပ်မယ်။ လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုတွေ မုန်းတဲ့ ကျမရှေ့မှာ အံ့သြဖွယ်ရာ အမှောင်လောကကို မြင်တွေ့ရတာတော့ တကယ့်ကို ရှော့ဖြစ်စေတယ်။ ရှေ့နေက လာရစ်နေတာ။ စခန်းမှုးက လာရစ်နေတာ။ ဒုရဲအုပ်က လာရစ်နေတာ။ အပိုင်ရဲက လာရစ်နေတာ။ အိုး.. ဒီအချုပ်ခန်း ဆိုတဲ့ တရားဥပဒေ အ၀န်းအ၀ိုင်းထဲမှာကိုပဲ ဥပဒေနဲ့ မလွတ်ကင်းမှုတွေရှိနေတာကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ နေရတော့တယ်။ ၆ ရက်မြောက်နေ့မှာ ထောက်လှမ်းရေး တာဝန်ခံတယောက် လာတွေ့တယ်။ သူက တပ်ကြပ်ကြီးဖြစ်ပြီး သူ့ကို ကျမသိနေတယ်။ သူ့လို၃ ရစ်ကို ရဲမြို့နယ်မှုး ၃ပွင့်က ခါးကျိုးနေအောင်ကို ရိုသေပြရတယ်။ ကျမကို သူ့ရှေ့စားပွဲမှာ ထိုင်ပြီး ဘာပြောချင်သလဲလို့ စမေးတယ်။ ကျမကို ဘာပုဒ်မနဲ့ တရားစွဲလဲ ပြောပြပါ။ နောက် ကျမဘာဝရမ်းမှ မရှိပဲ ၂၄ နာရီထက်ကျော် ချုပ်ထားတာကို ကျမ မကျေနပ်ဘူးလို့ ပြောတယ်။ ဘာထပ်ပြောချင်သေးလဲတဲ့။ အင်း ဒီရဲအချုပ်မှာ နေရင်း ကျမ မတရားတာတွေချည်း တွေ့နေရတယ်။ အားလုံးဥပဒေကို ချိုးဖေါက်နေပါတယ် ဆိုပြီး ကျမသိသမျှ အကုန် အ်ိတ်သွန် ဖာမှောက် ပြောလိုက်တယ်. အေးရော။
စခန်းမှုးရော မြို့နယ်မှုးရော မျက်နှာပျက်သွားတယ်။ ကျမကို အခန်းထဲ ပြန်သွင်းပြီး ညနေဖက်မှာ မိန်းမအချုပ်ခန်းက လူတွေအားလုံး ထောင်ထဲကို ပို့လိုက်တယ်။ ကျမ တယောက်တည်း ရှိတော့တဲ့ညပေါ့။
(၇) ရက်မြောက်နေ့ကို ပျင်းရိစွာ ကုန်ဆုံးရတယ်။ တယ်လီဖုန်းဖြေတဲ့ ရဲသားလေးတောင်မှ စကားကို အရင်လို ကျယ်ကျယ် မဖြေတော့ဘူး။ ကျမကို ပိတ်ထားတဲ့ ကျောက်သင်ပုန်းကြီးလဲ မရှိတော့ဘူး။ တံခါးနောက်နားက အုတ်ခုံလေးမှာ ကျမထိုင်ပြီး ရုံးခန်းထဲကို ကြည့်နေရင် သူတို့ ပြန်မကြည့်ရဲဘူး။ ကျမစကားပြောဖော်လဲ မရှိ။ ထမင်းချိုင့်လာပို့ရင် ချိုင့်ပဲ သွင်းခွင့်ပေး တယ်။ နေပေါ့ … ။ နေ့ခင်းဘက် အိပ်နေလိုက်တေ့ာတယ်။
ညနေ ၆ နာရီလောက် မှောင်စပျိုးချိန်မှာ စစ်ဝတ်စုံနဲ့ ၂ ယောက် စခန်းမှုးအခန်းထဲကို ၀င်သွားတယ်။ သိပ်မကြာဘူး ကျမ နာမည်ခေါ်ပြီး တံခါးသော့ကို လာဖွင့်တယ်။ စခန်းမှုးက ကြင်နာသနားတဲ့ အသံနဲ့ အသံကိုနှိမ့်ပြီး ထောက်လှမ်းရေးက လာခေါ်တယ် ပစ္စည်းတွေ အကုန်သိမ်းပြီး လိုက်သွားရမယ်တဲ့။ ဟုတ်လား ကောင်းပါတယ် လို့ ကျမက ပြန်ပြောပြီး သူတို့လာခေါ်တဲ့ အီးတူးသောင်ဇင် ကားနောက်ခန်းကို တက်လိုက်တယ်။ ဒီမြို့သူစစ်စစ်က ဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာ သိတာပေါ့။ ကျမတို့မြို့ပြင်ဖက်က စစ်တပ်ရှိရာကို ဦးတည်မောင်းနေတယ်။ မြို့ထဲကို ဖြတ်။ နောက် မြို့စွန် လယ်ကွင်းတွေကို ဖြတ်ချိန်မှာ ဘေးနားက စစ်သားတယောက်က ကျမကို ခေါင်းစွပ်လာစွပ်ပြီး ကြိုးကို တင်းတင်း ချည်လိုက်တယ်။ ဘယ်ကိုသွားတယ် ဆိုတာ ကျမ သိပါတယ် လို့ ပြောလိုက်တော့ ဘာမှ ပြန်ဖြေသံမကြားရဘူး။
Posted by ခင်မင်းဇော် at 10:46 PM7comments:
Posted by ခင်မင်းဇော် at 11:19 PM No comments:
The 141th Day
The Second and The Last Part of 8888!!!
Posted by ခင်မင်းဇော် at 9:58 PM2comments:
ရွှေဝါရောင်လူထုလှုပ်ရှားမှု ရက် ၁၀၀ ပြည့် အမှတ်တရ အတွေးများ
ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးအတွင်းက လူထုလှုပ်ရှားမှု စတင်ခဲ့တာ ရက် ၁၀၀ ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လုံးဝမလုပ်ချင်သော စစ်အုပ်စုနှင့်
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လုပ်ချင်သော်လည်း( တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လုပ်လျှင် ကြားဖြတ်အစိုးရအဖြစ် အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကို အသိအမှတ်ပြုမည်အထိ အလျှော့ပေးထားသော) တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့်ရအောင် ဘယ်လိုမှ ဆောင်ရွက်ခွင့် မရခဲ့သော NLD အတွက် …
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပါ့မယ်… ဦးအောင်ကြည်ကို ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးခန့်ပါ့မယ် အထိ စကားပြောသံ ကြားရအောင် တွန်းပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်…
ဒီ စကားသံ ရရှိဖို့အတွက် ရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှုနှင့် သံဃာကျောင်းသား ပြည်သူတို့ရဲ့ အသက်သွေးချွေးဘ၀ များပေးဆပ်လိုက်ရသည်ကိုတော့ မမေ့မလျှော့ မှတ်တမ်းတင်ရပေမည်။
တကယ့် ဆွေးနွေးပွဲ အစစ်အဖြစ် ဆက်လက် လျှောက်လှမ်းရန်အတွက် ဖိအားများကိုရော..
ဘယ်လို ပံ့ပိုး လုပ်ဆောင်သွားသင့်ပါသလဲ….
ခုလို အဆင့်မမှီသော တွေ့ဆုံဆွေးနွေး စကားဝိုင်းမှသည်၎င်း..
လုပ်ကြံကတိပေးသော စကားဝိုင်းမှ သည်၎င်း ….
အဆင့်တခုသို့ တက်ရောက်ရန် ထပ်မံ ရင်းနှီးမှုများ စိုက်ထုတ်ရပေဦးမည်။
စတေးခဲ့ကြပြီးသော ၀ိဥာဉ်များနှင့် ဘ၀များကတော့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ရရှိရန် ..
ပံ့ပိုးရမည့် အချက်များ လုပ်ငန်းများသည် အကြမ်းမဖက် လူထုလှုပ်ရှားမှု တခုတည်းသာ ရှိမည်ဟု ယုံကြည်မှု ရှိကြပါဦးမည်လော…..
တကယ်တော့ ပြည်တွင်းလှုပ်ရှားမှုသည်သာ အပြောင်းအလဲကို ဖန်တီးနိုင်မည် သေချာသော်လည်း ထိုပြည်တွင်းလှုပ်ရှားမှု စတင်ရန် (သို့မဟုတ်) အရှိန်မတန့်ရန် (သို့မဟုတ်) ဖြိုခွင်းမှု မခံရရန် (သို့မဟုတ်) စစ်အုပ်စုအား ဖိအားတစုံတရာပေးရန် အခြားသော လှုပ်ရှားမှုများလည်း လိုအပ်သေးသည် မဟုတ်ပါလား။
Posted by ခင်မင်းဇော် at 4:34 PM 1 comment: